Umntwana ngaphandle indoda: kutheni kukho ukubonelelwa omnye abafazi oomama - IVIDIYO INCOKO-Uthando-intanethi!
Umntwana ngaphandle indoda: kutheni kukho ukubonelelwa omnye abafazi oomama
Ke ngoko, iziko ka-parenthood yenza indima ebalulekileyo
Ngoko bathi yima kum yedwaUkuba ingaba umntwana ngaphandle umntu, ngenxa ukubonelelwa omnye abafazi baqonde abo banqwenela ukuba ingaba abantwana ngaphandle iqabane lakho. Umntwana ngaphandle umntu ke kunzima ukwenza esi sigqibo, kunye yintoni olomeleleyo uxinzelelo lwezentlalo omnye oomama ingaba banyanzeleka ukuba ulinde kwaye yintoni isemthethweni kwaye zonyango iinketho kukho ukuba ukuzalisekisa babuza abantwana njengokuba omnye umfazi, okwangoku sichaza umbhali ingcali kwi-usapho disputes Christina Mondlosz ukusuka Hanover kule yakhe incwadi entsha Ke Ingaba yima kuphela xa lonely kuba umntwana kwaye okulungileyo comment ukuthatha kwi-isandla. Ephendula umbuzo: kungani ukubonelelwa omnye abafazi ufuna babe oomama ngaphandle ngutata abo yenza isigqibo, Christina Mondlos ubhala:"siphila ngendlela kuluntu apho zethu izimvo malunga nosapho kwaye uthando, ufakelelo kwaye budlelwane nabanye ngabo radically ukutshintsha."Ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku, budlelwane nabanye kwaye usapho iifomu ndine thatha okanye gently dramatized uphawu ibhungane ka-sociability. Ingakumbi ulutsha M ke kuba kuphela, rhoqo hayi kakhulu inzala kwi stronger ubudlelwane kunye ividiyo incoko Ngexesha elinye, enew ngokuziphinda-phinda iifomu bakhulisa kwiminyaka yakutsha nje kwaye ingaba eba ngaphezulu rhoqo.
Incede nokuzala kuba abafazi ngokusebenzisa sperm umnikelo ngoku inkqubo esezantsi.
Ngoko ke, ukuba, kwesinye isandla, baninzi Abafazi kuphela akunjalo, kanti ke ilungile kuba budlelwane okanye zabo owakhe unyana, ngoko ke, kwesinye isandla, amayeza inikezela abafazi abo ufuna umntwana, nje enjalo ithuba: ubungqina kulutsha nkqu ngaphandle iqabane lakho. Omnye abafazi, umzekelo, abo banqwenela ukuba ingaba abantwana ngaphandle iqabane lakho, kunye bukhali criticism ukususela yenkampani iincwadi. Umntwana kufuneka umntwana, kodwa ubawo, kodwa inyaniso kukuba i-pros kwaye cons a umama kwaye umntwana usapho, - ubhala Christina Mondlos: ingaba boys and girls Kufuneka abantu ke iingcebiso kuba besebenza relatives? Enye i-american nzulu wajonga e kulutsha, kwaye iintsapho apho iintsapho wakhulela, kuyo intliziyo phandle ukuba aba bantwana baya demonstrated ngaphantsi ngokwesini-ethile yokuziphatha. Girls baba njengoko kuchaziwe geqe kwaye elinovakalelo boys, njengoko kunjalo kuzo esiqhelekileyo iintsapho kunye nonina kwaye ubawo kwabakho unobumba ividiyo incoko ukuba abantwana abakhoyo ke ngoko ngaphantsi olomeleleyo, kwi loluntu indima ngokungagqibekanga ngokwesini indlela, kusenokuba ebone njengoko i-luncedo, kodwa ngokuqinisekileyo hayi disadvantage. Kulo naliphi na ityala, i -"downside"ngu loneliness: ngabo kuphela eliphakathi-iphelelwe kwaye intlungu, yedwa, nazo zonke iimfuno umntwana care, kwaye kuphela financially noxanduva. Ke ngoko, xa igqiba nokuba ingaba umntwana ngaphandle iqabane lakho, kufuneka aqwalasele ngenyameko enkulu nokuba kufuneka kuthathelwe care umntwana, yayikukwenza ngokomthetho zokusebenza. Christine elifanelekileyo sichaza Mundlos:"A kunokwenzeka disadvantage ka ekubeni abantwana ngaphandle ubawo nguye uzalise nokungabikho zokusebenza, izixhobo zokusebenza zemali, ixesha ingqalelo. Uninzi abazali usoloko ufuna umntwana wabo ukuba ingaba ngokwaneleyo warmth, unyamezelo ixesha ke. Kodwa nkqu ukuba le nto harder ukuba yanelisa kunokuba kwimeko umzali iipere, uyayazi ukuba oku namanani imeko yiyo ngokwenene osisigxina kwezinye iintsapho. Kwaye nkqu ukuba purely oluntu talent kuba omnye abazali iya kuvavanya inzima ngakumbi ukuhlangabezana neemfuno zomntwana, njengoko kuba umzali couples, njengoko i-British nzulu ibonisa, nto leyo elinye ithuba: i lawns ka-kanye oomama kwi-unxibelelwano kunye yakho abantwana ngaphezulu, kodwa satisfaction kwaye ngokuqinisekileyo Weinberger. Kuba abafazi namadoda kwi-iityuwadefault colour budlelwane nabanye, kubalulekile obvious ukuba oku kuza kwenza ukuba kube lula kuba abantwana khetha. Ezinjalo classic usapho fertilization ingaba enyanisweni kuthathelwe ingqalelo kwaye nkqu society ilindele kuyo. Couples ingaba rhoqo phantsi phezulu loluntu koxinzelelo kwaye, umzekelo, ngokusebenzisa rhoqo imibuzo malunga wanting ukuba ingaba abantwana kwaye ukubonelelwa abantwana kwi-Asukelwa Abahlobo iqela ukuqala ngomhla fertilized usapho kwethuba. Le yindlela umfazi ke isisombululo kuba motherhood, nangona abaphila ne umntwana ngu secretly, kwaye ingabi neminqweno yakho kwaye okulindelweyo ukusuka ubomi.
Møde om oprettelse af en online Dating site"Dating Modeller"for piger
Chatroulette ngaphandle ubhaliso roulette ividiyo incoko kubekho inkqubela Dating ngaphandle ubhaliso kunye phones photo esisicwangciso-mibuzo roulette kwi-intanethi ngaphandle ads dating ividiyo Dating nge-girls-intanethi free bukela ividiyo incoko esisicwangciso-mibuzo roulette makhe incoko ividiyo incoko amagumbi ngaphandle ubhaliso